Weekly Nepal – Page 684 – Weekly News For All
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामा सोमबार ५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोमबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले भक्तपुरका १० जना, काठमाडौंका २४ जना र ललिपुरका २० जना गरी उपत्यकाका ५४ जनामा
काठमाडौं । सोमबार नेपालमा १८० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितको संख्या १५ हजार ९६४ पुगेको छ । कोरोना संक्रमणबाट निको भई घर फर्किनेको संख्या २६४ रहेको छ ।
काठमाडौं । दुई पटकको सामुहिक वार्तामा कुरा मिल्न नसकेपछि नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच वान टु वान वार्ता माफर्त सहमति खोज्न लागेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिनुपर्ने पक्षमा पार्टीभित्रकै शीर्ष नेताहरु खरो रुपमा उत्रिएपछि नेकपा
व्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिस : सहकारीले बढी ब्याज लिन नपाउने
काठमाडौँ । सरकारले मुलुकभरका सहकारी संस्थाहरूले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकभर सहकारी संस्थाहरूले आफूखुसी जथाभावी बढी ब्याज लिँदै आएका थिए । त्यसलाई अंकुश लगाउन सरकारले सहकारी संस्थाहरूले लिन पाउने ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने
कीर्तिमानी रकममा मागुइरे म्यानचेस्टर युनाइटेडमा अनुबन्धित
काठमाडाैँ । इंग्लिस डिफेन्डर ह्यारी मागुइरेका लागि लेस्टर सिटी र म्यानचेस्टर युनाइटेडबीच कीर्तिमानी रकममा सहमति जुटेको छ । युनाइटेडले इंग्ल्याण्डका सेन्टर डिफेन्डर मागुइरेका लागि ८० मिलियन पाउण्ड खर्च गर्ने भएको छ । मागुइरेले अघिल्लो वर्षमात्रै लेस्टारमा पाँच वर्षको सम्झौता
उपनिर्वाचन मंसिर १४ गते, ५० पदका लागि मतदान हुने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरेको आयोगले शुक्रबार मंसिर १४ गतेका लागि उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो।
काठमाडौं । कवि तथा आख्यानकार राजन मुकारुङको पाँचौं कविता संग्रह ‘हाटा जाने अघिल्लो रात’ शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ।संग्रहको अभिनेता दयाहाङ राई, पत्रकार यज्ञश र समाशास्त्रका विद्यार्थी कैलाश राईले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रमको सुरुवातमा अभिनेता दयाहाङ राईले संग्रहभित्रको ‘गाउँ’ शीर्षकको
सुनिताले लिएर आइन् ‘चुरा टीका लाली’(भिडियाे)
काठमाडौं । गायिका सुनिता दुलालले तिजको नयाँ गीत सार्वजनिक गरेकी छन् । सुनिताको स्वर रहेको ‘चुरा टीका लाली’ बोलको गीतमा डा. कृष्णहरी बरालको शब्द रहेको छ । महेश खड्काले संगीत भरेका छन् । सुनिता दुलाल र रुबी लामा फिचर्ड
Previous 1 … 682 683 684 685 686 … 696 Next
एसईई २०७६: सबै विद्यार्थीको न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड !
१ सय ६८ किलोकी महिलाले जन्माइन् स्वस्थ शिशु
कान्तिपुरमा कोरोनाको असर
नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा
संक्रमितको संख्या १० हजार नाघेसँगै नेपालमा कोरोना चौथो चरणमा प्रवेश